आफू निकट नेतासँगको छलफलपछि ओली-प्रचण्डको भेट : दुई घण्टा के कुरा भयो ? – HostKhabar ::
आफू निकट नेतासँगको छलफलपछि ओली-प्रचण्डको भेट : दुई घण्टा के कुरा भयो ?
काठमाडौं : पाँच दिन लामो संवादहीनतापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबारदेखि भेटवार्ता नगरेका प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले बालुवाटारमा समसामयिक विषयमा करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरेका हुन्।
भेटमा सभामुख चयन, विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा छलफल भएको छ। बुधबार नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि दुई अध्यक्षबीच लामो कुराकानी भएको हो।
बिहीबार बिहान साढे ११ बजे बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड दिउँसो २ बजे मात्र बाहिरिएका थिए। ओली र प्रचण्ड भेट हुनुअघि बालुवाटार र खुमलटारमा प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षले आफू निकट नेतासँग छलफल गरेका थिए।
प्रचण्डसँग भेट गर्नुअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङलगायतसँग छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड निवास खुमलटारको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटालगायतका नेता सहभागी थिए।
संसद्‍मा झन्डै दुई तिहाइ मतका साथ बलियो उपस्थिति रहेको नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा संसद् एक महिना बन्धक बनिसकेको छ। बन्धक संसद् खुलाउने र पार्टीभित्रको धु्रवीकरण तोड्न नेकपाका दुई अध्यक्षको भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
पार्टीभित्रको गाँठो फुकाउन संवादमा बस्नुपर्ने दुवै अध्यक्ष पाँच दिनसम्म आफूनिकट नेतासँगको संवादलाई मात्र निरन्तरता दिएका थिए। बिहीबारको भेटले भने त्यसको क्रमभंगता भएको छ। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेको राजीनाको विवादले दुई अध्यक्षबीचको असमझदारी बढाउको अनुमान गरिएको छ।
तुम्बाहाङफेले राजीनामा नदिँदा पुस ४ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन बिजनेसबिहीन बनेको छ। पुस ११, १६ र २७ गते गरेर तीन पटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थिगत भइसकेको छ। अर्को बैठक माघ ६ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।